Ezumike Ezumike maka Azụmaahịa na Ecommerce | Martech Zone
Ndụmọdụ Ezumike Ezumike maka Azụmaahịa na Ecommerce
Wednesday, November 11, 2015 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Douglas Karr
Ọ bụghị ihe ijuanya na 78% nke ndị na-azụ ahịa ga-enyocha ihe ha ga-azụta na ntanetị, mana ihe bụ ihe ịtụnanya na ọtụtụ ndị na-ere ahịa na ụlọ ọrụ ecommerce na-ahapụ ọnụnọ ha n'ịntanetị site na akụkụ ahụ. Otu n'ime ihe ndị ahụ na-efu bụ Pinterest - the edu netwọk mmekọrịta maka onyinye mmụọ nsọ.
N'ime afọ 15 gara aga, 75% nke mkpọsa mkpọsa abiala site na ntaneti. Ọ bụ ezie na imirikiti ahịa ka na-eme na ụlọ ahịa brik na ngwa agha, obi abụọ adịghị ya na teknụzụ na-emetụta uto ahịa. Site na nnabata nke teknụzụ na-echekwa na ntanetị, ịlụ di na nwunye ahụmịhe abụọ na-enweghị nsogbu bụ isi ihe na-akpata ịba ụba ahịa.
Lauren Jung nke Adịghị adị enyela mkpịsị ugodi 3 ndị a ịbawanye ahịa ahịa ezumike:
Malite n'isi - Ndị mmadụ na-azụ ahịa tupu oge gara aga. N'afọ gara aga, ọtụtụ ụdị anabataghị okporo ụzọ na ahịa n'ihi na ha na-etinye uche na ezumike kalenda izu (Black Friday, Cyber ​​Monday, wdg), ma ọ bụghị ịmalite n'oge dị ka ụdị ndị ahụ chere n'ihu mkpọ ahụ.
Elegharala dijitalụ anya - Ọtụtụ brik na ngwa agha na-eche na ha dị mma ịga n'ihi na ndị mmadụ ga-achọta ha, mana eziokwu ga-agwa… ndị na-azụ ahịa na-eme nyocha ha n'ịntanetị tupu ha achọpụta ihe. Ma ị bụ brik ma ọ bụ ngwa agha ma ọ bụ ụlọ ahịa n'ịntanetị, ịchọta gị n'ịntanetị dị oke mkpa.
Ndị na - emetụta ya - bụ ebili nke ọdịnihu, yana ụzọ ị ga-esi mgbe ị na-eme atụmatụ ire ahịa ezumike gị. Ọ dịghị onye na-ele anya mgbasa ozi ọkọlọtọ ọzọ. Na nke ka mkpa… 200 MMMMillion people are using ad blockers. Yabụ na ego gị tara ahụhụ na-ahụdịghị ụbọchị.
Tags: mmetụta dijitalụdijitalụ influencerezumikeezumike ahiaalaghachiree iheree ihe kaririadị